Alessio Romagnoli oo diyaar u ah in uu kasoo muuqdo finaalaha tartanka Coppa Italia - Jubbaland TV
Alessio Romagnoli oo diyaar u ah in uu kasoo muuqdo finaalaha tartanka Coppa Italia
By admin May 2, 2018 367
Daafaca dhexe ee Kooxda AC Milan Alessio Romagnoli ayaa ku soo laabtay tababarka Kooxdiisa, kaas oo rajaynaya in uu kasoo muuqan doono kulanka toddobaadka soo aadan.
Kooxda ku Ciyaarta garoonka Stadio Giuseppe Meazza ee Rossoneri ayaa toddobaadka dabe la Ciyaari doonta Kooxda Hellas Verona, hase yeeshee Romagnoli ayaa raba in uu kasoo muuqdo kulankaas iyo si la mid ah finaalaha tartanka Coppa Italia oo 9-ka bishan ay la qaadan doonaan Kooxda cadowgooda ee Juventus.
Xiddiga heerka Caalami ee Wadanka Talyaaniga Alessio ayaa garoomada ka maqnaa muddo seddex isbuuc, kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa.
Sida laga soo xigtay Sky Sport Italia, Tababaraha Kooxda AC Milan Gennaro Gattuso ayaa rajeynaya in Alessio Romagnoli uu diyaar u noqon doono kulanka Sabtida iyo kan fiinaalaha Coppa Italia ay la Ciyaari doonaan Kooxda Cimaaliqada dalka Talyaaniga ee Bionconeri Arbacada soo aadan.
The post Alessio Romagnoli oo diyaar u ah in uu kasoo muuqdo finaalaha tartanka Coppa Italia appeared first on Wararka Ciyaaraha.
Alvaro Morata Oo Loogu Gacan Haatinayo Horyaalka Serie A ee Dalka Talyaaniga Xili AY Dooneyso Kooxda,,,,,,,,,
Milan oo ku dhawaaqday xiddigaheeda ka hor kulanka Arsenal, xilli xiddigo muhiim ah ay ka maqan yihiin laba dhinac
Antonio Conte oo xaqiijiyey sababaha uu goolhaye Thibaut Courtois ku seegay kulanka Leicester City
Tottenham Hotspur Oo Ku Dhawaaqday Inay Heshiis Cusub U Saxiixeyso Erik Lamela.